Uguquko lwesine luphoqelela okwehlukile - Bayede News
UMA sekukhulunywa ngesiNgisi kuphathwa eye-4th Industrial Revolution kudideka izifundiswa ngoba kusuke kukhulunywa ngento ongeke uyibambe ngesandla kodwa ibe yenzeka phambi kwethu usuku nosuku. Uma sikhuluma ngoguquko lwesine lwezimboni sikhuluma ngesikhathi sanamhlanje, esiphila kuso.
Mhlawumbe kuzokuba lula ukuyizwa indaba yoguquko lwesine uma sicabanga izinto ezenziwa ngaboHlanga.
Ngezwa kuthiwa abathakathayo abanemikhovu bayayithuma iye lapho beyikhomba khona, ifike yenze umsebenzi ingabonwa bese ibuya ize ekhaya. Amukho-ke esengike ngambona othi wake wakubona lokho kwenzeka, kodwa abaningi bayakholwa wukuthi yinto ekhona. Abanye babethaka izibiba babize igama lentombi ibonakale seyifika qathatha izwe igama layo limenyezwa.
Uguquko lwesine seluyithathe lwayibeka kwelinye izinga indlela yokwenza ibhizinisi. Kucutshungulwa kwakhiwe amasu okwenza umsebenzi uzihlalele ekhaya, noma uthumele izinto zakho ziyokwenzela umsebenzi zibuye ziwufeze njengoba ziyaliwe. Isizukulwane sanamuhla sikhule sizwa futhi sibona into ebizwa ngerobhothi, eyenza umsebenzi obewenziwa ngumuntu, iwenze ngendlela ethi ncamashi neyenziwe ngumuntu ophilayo, kwesinye isikhathi iwenze kangcono nangokwethembeka.
Sikhuluma ngezinto ezenzeka namhlanje sibabaze sibona imishini endiza ingashayelwa muntu, sibone imoto ezipakelayo umshayeli engekho kuyo, sibone umuntu evula isango lomuzi wakhe eThekwini yena ebe eseGoli kube sengathi wumlingo.
Lapha umuntu uyaye abike ngocingo ukuthi usefikile esangweni lomuzi acele ukuvulelwa, ngaphandle kokubuza ukuthi bakuphi abakulowo muzi ngaleso sikhathi.
Namuhla sewungase ukwazi ukuthenga imithi yokuzelapha ekhemisi, bayindizise ize kuwe ngento ebizwa ngedrone engashayelwa muntu ohlezi kuyo, kodwa etshelwa ngobuchwepheshe besimanje ukuthi mayiye kuphi.
Kungenzeka lokho esikhuluma ngakho kubukeke njengephupho-mini kwabanye abangakholelwa ekujuleni komqondo womuntu. Lezinto engizibala ngenhla zikhombisa ukuthi umuntu umfuze akamshiya uMdali wakhe, ngoba ukwazi ukusungula into engakaze ibe khona ibatshazwe yizwe lonke, abantu bezibuza ukuthi ubecabangeni ngenkathi enza lesisakhiwo.
Abadidiyeli bemfundo bavula imikhakha eyehlukene lapho umuntu efunda ukuthi uma kuhlanganiswa okuthile nokuthile kuphuma into ethile engakaze ibonwe.
Kunalabo abajulayo bacabange ngezinto ezenziwa ngabantu, ezingenziwa kalula ngoba kwaziwa ukuthi ezinye bazenza benokwenqena. Lezinjula-buchopho ziyaye zenze okuthile ukuze umsebenzi wenzeke kalula.
Ngalolu guquko lwesine kuyacaca ukuthi umhlaba uyasuka ekusebenziseni amandla kodwa sewusebenzisa ulwazi. Lokhu kuchaza ukuthi kunezinto ezizozenzekela uhlezi kumbe wenza okunye.
Kudingeka ubuchwepheshe bokuhlela into ezokuba ngumshini ozishintshayo osebenza ngohlelo olungaphakathi kuyo, ingadingi ukwenziswa yisandla somuntu. Kwesinye isikhathi umnikazinto ukhuluma nayo ayitshele ukuthi ayenzeni bese iziqhubekela yenze lokho okushiwo ikuqede ngendlela etshelwe ngayo. Mhlawumbe sewuke wayibona ikhompyutha okhuluma nayo ibhale lokho okukhulunywayo njengoba kunjalo. Le khompyutha iyalazi izwi lomnikazi wayo, ayilaleli noma yiliphi izwi, kodwa izwa lelolizwi elifakwe kuyo.
Lolu hlobo lwekhompyutha luyazi ukuthi umnikaziyo uwaphimisa kanjani amagama athile. Kufanele sihlale sikhumbula ukuthi ikhompyutha ayinalo ulimi lwaboHlanga.
Kusenesidingo esikhulu ukuba silwele ukuthi kube namakhomyutha asebenza nangezilimi zaboHlanga.
AmaNyuvesi anophiko lokucwaninga okunhlobonhlobo okuthi ekugcineni lolo cwaningo lushicilelwe ukuze lusetshenziswe yilabo abangongoti kulowomkhakha.
Umbuzo ofikayo emqondweni ngothi, ucwaningo olwenziwa kumaNyuvesi aseNingizimu Afrika lwehluke kanjani kolwenziwa kumaNyuvesi aseJapan, eChina nase-United States of America (USA).
Yikuphi okungelekelela izifundiswa zaseNingizimu Afrika zicabangise okwezakulamazwe
esengiwabalile? Omunye umbuzo ngothi, amayyuvesi axhumene kangakanani nezamabhizinisi nezimboni?
Ulwazi olucutshungulwayo luxhunyaniswa kanjani phakathi kweNyuvesi nezimboni? UHulumeni unasiphi isandla ekuqikekeleni ukuthi okwenziwa yisandla sokudla kuyasebenzelana nokwenziwa yisandla sokunxele. Kumele uma isandla sokudla sithatha insipho, esokudla sibe sikhongozele amanzi, bese zithi uma zihlangana zigezane.
Uma kungekho ukuxhumana nokusebenzisana izwe laseNingizimu Afrika lisazokuma lapho likhona, sishaye ihlombe ezinye izizwe zigiya ziqephuza.
Ucwaningo olwenziwe ngabathile luyakugcizelela ukubaluleka kokusebenzisana phakathi kwamanyuvesi nezimboni uma izwe lifuna ukukhula emnothweni.
Ucwaningo olushicilelwe ngabakwaMultidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ngoNhlangulana ka-2018 luyakugcizelela ukuthi izwe laseShayina lenza isiqiniseko sokuthi amanyuvesi athathisela futhi asebenzisane nezimboni ezisezweni laseShayina nakwamanye amazwe ukuze kuthi abakufundisayo kube nomthelela omkhulu ekuthuthukisweni komnotho wezwe laseShayina. Lokhu kwenza kubonakale ukuthi yini eyenza izwe laseShayina libe yizwe eliphambili uma kukhulunywa ngobuchwepheshe bezimboni noguquko lwesine.
Kusanda kuvotwa kwakhethwa oNgqongqoshe bemiNyango kaHulumeni eNingizimu Afrika. Kungakuhle kubhekisiswe ukuthi iminyango yenzani ukubhekana nenselelo elethwa wuguquko lwesine lwezimboni.
Uma sibheka uMnyango weMfundo Ephakeme, kuyacaca ukuthi akukho ukusebenzisana phakathi kwezimboni nezikhungo zemfundo. Lezinhlaka zozintathu kusamele zihlangane zinikezane umsebenzi ozoyisa isizwe phamibili.
UNgqongqoshe wezeSayensi Nobuchwepheshe unenselelo yokuthatha isizwe asibeke emgudwini ocacile ozokhiqiza abantu abazokwenza iNingizimu Afrika isungule imikhiqizo ezokwenza imisebenzi ethile ezothandwa angamanye amazwe.
nguLindani Dhlomo Jul 8, 2019